Ny Loza Mahazo ny Zavaboary Sy Ny Hita Ao Amin’ny Bilaogy WildlifeDirect · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2017 21:29 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Janvier 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tsy tena nahomby ny fikasana hamono ny lehiben'ny vondrona mpikomy Lords Resistance Army (LRA) Joseph Kony tao Oganda. Etsy andaniny kosa dia miha-maro ireo sivily niharam-boina. Nisy ny loza niseho nandrava ny Fiarovana ny Zavaboary, araka ny tatitra tao amin'ny bilaogy fiarovana ny zavaboary Baraza, dia ny fanafihana ny Mpiambina ny Valan-javaboary Garamba izay nataon'ireo mpikomy LRA tamin'ny 2 Janoary 2009.
Araka ny fanambarana an-gazety izay navoakan'ny manampahefana tao amin'ny Valan-javaboary Garamba tamin'ny 6 Janoary sy nozarain'ny WildlifeDirect, nahafaty olona miisa 8 ny mpikomy anisan'izany ny mpiambina 2 sy ny vadiny 2 , miampy ny fahavoazana tsy hay lazaina tamin'ny fananana. Nisy ny adihevitra taorian'izay tao amin'ny Baraza momba ny olona izay tena tompon'andraikitra tamin'ity fanafihana ity.
Tao Kenya, nitatitra ny zava-nitranga tao amin'ny Torapasika Diani eny Amorontsiraky ny Ranomasimbe Indianina ao Kenya ny bilaogy Whale Sharks (Antsantsa Trozona) izay nahitana Trozona Misy Trafo tratran'ny harato nomena ho an'ny mpanjono teo an-toerana avy amin'ny ONG fampandrosoana. Natao ho fanoherana ity lahatsoratra ity satria mihevitra ny Whale Shark Trust izay mitantana ity blaogy ity fa tsy mety ary tsy ara-dalàna ny fanomezana ny harato ho an'ireo mpanjono. Efa nitatitra voina nisafotofoto nahazo ny trozona misy trafo toy izany ihany koa izy ireo teo aloha tao amin'ny bilaoginy ary niantso ny firotsahana an-tsehatra manoloana izany.
Mbola ao Kenya ihany, nisy trangan-javatra hafahafa notaterina avy tao Samburu, izay nahitana leoparda iray novonoin'ny leoparda iray hafa. Tena nanafintohina tokoa ity tranga fihinanam-biby samy biby ity. Tsindraindray no ahitana ny tatitra mikasika ny fihinanana ny mitovy karazana amin'ny tena eo amin'ny biby mampinono kanefa matetika izany dia ahitana ny famonoan'ny biby lahy sy ny fihinanany ny biby zanany (vao teraka) mba hanafoanana ny fifaninanana. Mamariparitra izany zava-mitranga izny ato ny bilaogy Ewaso Lions .
Ao anatin'ny fanadihadiana iray mamirapiratra kosa, taonan'ny rajako ny taona 2009 . Manolotra ny mpamaky ireo hetsika izay efa noraisina mba hanombohana ny fankalazana ity Rajako Goavana mahafinaritra ity ny bilaogy Fiarovana ny Rajako.